स्वादिष्ट र विशिष्ट स्वाद र सुगन्ध संग पौष्टिक उत्पादन - धेरै Gourmets धूम्रपान माछा संग आफैलाई ज्यादै पुलपुल्याउने प्यार। यो खाना लागि ताजा, अझै पनि उपयुक्त तुलना लामो अवधि चिनिएको छ। एकै समयमा, घर सही मा धूम्रपान माछा कसरी भण्डारण गर्न, सबैले थाह छ।
फ्रिज यो उत्पादन भण्डारण समय को एक निश्चित अवधि छ। सबै धूम्रपान को तरिका कस्तो लागू गरिएको छ, साथै एक अन्य कारक को निर्भर हुनेछ।
धूम्रपान को अवस्थित विधिहरू
तातो-धूम्रपान माछा तापमान समयमा सिर्जना - छैन 80 र कम 170 उच्च भन्दा डिग्री सेल्सियस।
शांत गर्न प्रबन्ध गर्दा चिसो विधि, को धुवाँ लामो dymoprovodu मार्फत बित्दै गर्दा प्राप्त भएको छ। यो 40 डिग्री भन्दा उच्च तापमान बाहिर जान्छ। यो विधि मा प्रक्रियाको जटिलता पक्कै बढ्छ, तर उत्पादन गुणस्तर एकदम सुधार छ।
जब, वा अर्ध धूम्रपान तापमान लागि संयुक्त समाप्त उत्पादन स्वाद जस्तै विशेष गुण दिन्छ जो, र आफ्नो जीवन मा 50 र 80 डिग्री बीच कायम गरिएको छ।
को पेशेवरों बीच, साथै, वर्गीकरण, खातामा काठ decomposes जो बाटो लिएर लागू हुन्छ। धूम्रपान धुवाँ, भेद धुवाँ-मुक्त, भिजेको र मिश्रित, तर को आफ्नो जीवन त यो अर्थ खातामा लिन छैन, समाप्त धूम्रपान उत्पादन, यो पक्ष वस्तुतः कुनै प्रभाव छ।
फ्रिज मा धूम्रपान माछा कसरी भण्डारण गर्न?
धूम्रपान उत्पादनहरु फ्रिज मा राम्रो अवस्थामा रूपमा लामो रूपमा उपयुक्त अवस्था समर्थित प्रशीतन एकाइ को भित्री कोठामा मा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ लागि रह्यो, र विशेष खातामा तीन मापदण्डहरू लिए।
तापमान अवस्था। तातो प्रक्रिया द्वारा तयार उत्पादन भण्डारण गर्दा, तापमान प्लस वा दुई डिग्री माइनस हुनुपर्छ। माछा धूम्रपान माइनस पाँच डिग्री - शून्य भण्डार गर्नुपर्छ।
को चिस्यान स्तर बारेमा 90 प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। तल्लो दर माछा भोकमरी र यसको गुण गुमाउनु हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ, उत्पादन ढुसी लागेको चिस्यान बन्न सक्छ।
वेंटिलेशन को उपस्थिति। Refrigerating खण्ड कहिले काँही त्यो हावा परिवर्तन गर्न सक्षम हुन खोल्न गर्न। माछा छैन हावा पास जो छैन कन्टेनर मा प्याकेज हुनुपर्छ। अपवाद एक पूर्ण airless वातावरण सिर्जना गर्न अनुमति दिँदा, निर्वात प्याकेजिङ्ग छ।
तपाईं धूम्रपान माछा कति भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ
सबैभन्दा perishable माछा तातो-धूम्रपान पकाएको। फ्रिज राख्नु, यो यसको मूल स्वाद पूर्ण माथिको मापदण्डहरू सबै भेट पनि भने, मा चौथो दिन पहिले देखि नै छ हराउछ।
यी स्थितिहरू क्षमताहरु समर्थन गर्न उपलब्ध छैन भने, यस्तो उत्पादनहरु सुरक्षित भण्डारण लागि समय फ्रेम पनि अधिक कम।
माइनस 2.5 डिग्री मा एक फ्रीजर मा Holodnokopchenaya माछा बारम्बार आफ्नो जीवन वृद्धि प्राप्त गर्दछ।
चिसो धूम्रपान विधि कारण चिस्यान, उच्च नुन सामग्री र bactericidal घटक को उपस्थिति को सानो मात्रा को यसको सामग्री थप यस्तो उत्पादनहरु राख्न लामो अनुमति दिन्छ।
यसरी धूम्रपान माछा, मैकेरल, घोडा मैकेरल मा तयार वा मई 50-60 दिन बचाउँछ। माछा बढी प्रतिरोधी प्रजाति अप 75 दिन यसरी भण्डारण गर्न सकिँदैन।
तखतालाई जीवन विस्तार को संभावना
धेरै आधुनिक Housewives को धूम्रपान माछा र अब अवधि कसरी भण्डारण गर्न थाहा छ।
यस्तो उत्पादनहरु को सुरक्षित भण्डारण वृद्धि गर्न सरल र सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका विशेष निर्वात प्याकेजिङ्ग प्रयोग छ।
हाल, कुनै पनि हार्डवेयर स्टोर एक एकदम कम मूल्यमा यस्तै प्याकेज प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, र आफ्नो आवेदन को प्रभाव एकदम महत्वपूर्ण छ।
जो भित्र सिर्जना एक airtight खोल, मा धूम्रपान माछा राख्दै एक निर्वात, तपाईंले तीन महिनाको लागि उत्पादन को सुरक्षित भण्डारण पक्का हुन सक्छौं।
धूम्रपान माछा को आफ्नो जीवन गहिरो-चिसो द्वारा पनि हासिल गर्न सकिन्छ एकदम वृद्धि। माछा, माइनस तीस डिग्री मा स्थिर, महिना को लागि ताजा रहन सक्छ।
सधैं सम्भव छैन गहिरो-चिसो वा निर्वात कन्टेनर मा पैकिंग, तर धेरै मान्छे कसरी छरितो बाटो मा धूम्रपान माछा भण्डारण गर्न थाहा छ। यस मामला मा, यो बस पन्नी मा र्याप र फ्रिज राख्नुभयो। जहाँ तापमान अप प्लस दुई वा तीन डिग्रीमा, यसलाई सात दिनको लागि यसको स्वाद राख्ने गर्न सक्नुहुन्छ।
को धूम्रपान माछा, प्रासंगिक साहित्य मा पाइन्छ भण्डारण गर्न कसरी विभिन्न सिफारिसहरू।
समाप्त माछा एक्स्ट्रानिअस Smells को अवशोषण जोगिन गर्न, यो चर्मपत्र वा पन्नी मा र्याप गर्नुपर्छ। फ्रिज मा धूम्रपान मासु राखेर अघि, defrost यसलाई बनाउन र सबै समतल सफा गर्न मनमोहक छ।
धूम्रपान माछा कुनै पनि खराब खाना पछिको छैन राखिएको गर्न सकिन्छ।
यो नुनीन साथ तयार ससेज भण्डारण गर्न सकिन्छ। यसको तयारी र नुन पानी अनुपात लिइएका छ लागि 2: 1। यो पातलो कपडा को तयार समाधान संग गर्भवती र प्रत्येक माछा वरिपरि र्याप छ। शीर्ष माछा भारी कागज मा र्याप र सबै भन्दा कम विभाजन मा एक फ्रिज राख्नुभयो।
फ्रिज को फ्रीजर खण्ड कत्तिको धूम्रपान माछा स्टोर, माथि उल्लेख, तर साथै, यो आफ्नो पूर्व-चर्मपत्र कागज लपेटन द्वारा, तपाईं पनि आफ्नो उत्कृष्ट सुगन्ध संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, कि सम्झना गर्नुपर्छ।
प्रशीतन बिना धूम्रपान माछा भण्डारण
, कपडा बैग मा राख्दै को अटारी मा उत्पादन धूम्रपान होल्ड गर्न सहज।
जहाँ यो sawdust वा chaff संग peppered छ सानो बक्स, मा अनुज्ञेय भण्डारण। पूर्व माछा प्रसारित र soot को साफ गर्नुपर्छ।
समय शिविर वा पिकनिक मा धूम्रपान माछा कसरी भण्डारण गर्न? यस मामला मा, यो पनि एउटा सानो बक्स, मुख्य कुरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ - झिंगा र अन्य कीराहरू यसलाई अनुमति छैन, साथै अप्रिय विदेशी गंध हेरविचार।
को धूम्रपान प्रक्रिया जो पनि अवधारणा अवधिको थप वृद्धि सकारात्मक प्रभाव छ जुनिपर को sprigs, तल मा राख्न सिफारिस गरिएको छ।
स्वीटी: नयाँ विदेशी फल उपयोगी गुणहरू
कावीयार Kets। उत्पादन र यसको विशेषताहरु को विवरण।
के jaggery उपयोगी छ, र यसको विशेष विशेषताहरु के हुन्?
पहिलो र दोस्रो पाठ्यक्रम मा ससेज salchichon। व्यञ्जनहरु
Regenerating हात क्रीम: सुविधाहरू, चयन र नियम को आवेदन
को CPU र GPU तापमान मापन लागि कार्यक्रम
विवरण र समीक्षा: के को लागि थ्रेड मिसिन हुनुपर्छ। दर्जा निर्माताहरु
शरद ऋतुमा रातो कारागार को सही रोपण
समीक्षाहरू: «Faberlic», होंठ चमक «रंगको वेव»। छायाहरु: कला। 4666 "रसदार तरबूज" र कला। 4518 गर्म कोकोआ
"नैतिक मानिस," Nekrasov: कविता को विश्लेषण, पोर्ट्रेट कुख्यात खलनायक
सपना छोराछोरीको गुमाउन: यो के मतलब? हराएको बच्चा फेला बारेमा सपना को व्याख्या
महिलाहरु मा दुर्व्यवहार सिस्ट के हो? यसलाई कसरी चिन्न सकिन्छ?
जोडाहरू र सिंहले - संघ स्ट्राइकिङ्!
आधुनिक पर्खाल सजावट सामग्री। बाहिरी पर्खालहरूको लागि फिनिशिंग सामग्री